Sidee bay Xayeysiiska Dulucda ahi inooga Caawin Karaa inaan u Diyaargaroobno ​​Mustaqbal aan Cookie lahayn? | Martech Zone
Google ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay dib u dhigeyso qorshayaasheeda ah inay ka takhalusto cookies-ka saddexaad ee biraawsarka Chrome illaa 2023, sanad ka dib sidii markii hore loo qorsheeyay. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ogeysiiska laga yaabo inuu u muuqdo tallaabo gadaal u ah dagaalka loogu jiro asturnaanta macaamilka, warshadaha ballaaran ayaa sii wada inay sii wadaan qorshayaal ay ku dhimayaan adeegsiga kukiyada dhinac saddexaad. Apple waxay bilowday isbeddelada IDFA (Aqoonsiga Xayeysiiyaasha) oo qayb ka ah cusboonaysiinta macruufka 14.5, taas oo u baahan barnaamijyada si ay u weydiiyaan dadka isticmaala inay oggolaansho u siiyaan inay ururiyaan oo wadaagaan xogtooda. Intaa waxaa sii dheer, Mozilla iyo Firefox waxay mar hore joojiyeen taageeradii kukiyada dhinac saddexaad si ay ula socdaan dadka isticmaala daalacashadooda. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la xisaabtamayo Chrome kala badh dhammaan taraafikada shabakadda ee Mareykanka, ogeysiiskan ayaa weli calaamad u ah isbeddelka dhul gariirka ee kukiyada dhinac saddexaad.
Waxaas oo dhami waxay horseedaan in xayeysiisyada internetka lagu riixo si ay ula qabsadaan shabakad si gaar ah loo wado, taas oo siinaysa adeegsadayaasha dhammaantood inay si fiican u xakameeyaan xogtooda. Jadwalka 2022 -ka had iyo jeer wuxuu ahaa mid hami weyn leh, taasoo la micno ah in waqtigan dheeriga ah ay soo dhaweeyeen xayeysiiyaasha iyo daabacayaasha, maadaama ay siineyso waqti dheeri ah oo ay kula qabsadaan. Si kastaba ha ahaatee, u-gudubka adduun-ku-karisku ma noqon doono beddel hal mar ah, laakiin waa geeddi-socod soconaya oo loogu talagalay xayeysiiyayaal hore u socday.
Ka saarista Ku tiirsanaanta Kukiyada
Xayeysiiska dhijitaalka ah, kukiyada dhinac saddexaad waxaa si weyn u adeegsada shirkadaha teknolojiyadda xayeysiiska si loo garto adeegsadayaasha desktop-ka iyo aaladaha mobilada ujeeddooyinka bartilmaameedka iyo warbixinta. Iyada oo ku saleysan isbeddelada dookhyada macaamilka ee ku saabsan sida xogtooda loo ururiyo ama loo adeegsado, summadaha waxaa lagu qasbi doonaa inay kala gooyaan ku tiirsanaantooda kukiyada, iyagoo u weecanaya mustaqbal la kulma heerarka asturnaanta cusub. Meheradaha meheraddu waxay u adeegsan karaan xilligan cusub fursad ay ku xalliyaan qaar ka mid ah arrimaha hoose ee ku xiran kukiyada, sida tartiib-u-raridda iyo xakamaynta xogta daabacayaasha ee kooxaha tifaftirka, ama kukiyada u dhigma inta u dhexeysa aaladaha kala duwan ee xayeysiiyayaasha.
Intaa waxaa sii dheer, ku -tiirsanaanta buskudka ayaa suuq -geeyayaal badan ka dhigtay inay si xad -dhaaf ah diiradda u saaraan istiraatiijiyadaha bartilmaameedkooda, iyagoo u arka inay ku tiirsan yihiin moodooyinka sifaynta ee la isweydiin karo oo ay laabtaan cutubyada xayeysiiska ee caadiga ah oo riixaya badeecadda xayeysiiska. Inta badan, qaar ka mid ah shirkadaha qaybta ayaa ilooba in sababta ugu badan ee xayeysiintu u jirto ay tahay in la abuuro shucuur wanaagsan qof kasta oo la falgala astaanta.
Waa maxay Xayeysiiska Macnaha guud?
Xayeysiiska macnaha guud wuxuu caawiyaa aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee isbeddelaya wuxuuna gaaraa macaamiisha iyada oo loo marayo falanqaynta u eg aadanaha (oo ay ku jiraan qoraalka, fiidiyaha, iyo sawirrada), isku-darka, iyo meelaynta si ay u awoodaan inay ku daraan xayeysiis ku habboon nuxurka iyo bay'ada bogga.
Xayeysiiska macnaha guud 101
Macnaha guud waa jawaabta ugu fiican oo keli ah ayaa laga heli karaa miisaanka
In kasta oo jardiinooyinka darbiga ah ay sii ahaan doonaan ikhtiyaar ay xayeysiiyayaashu ula falgalaan macaamiishooda suurtagalka ah iyagoo adeegsanaya xogta qaybta koowaad, su’aasha ugu weyn ayaa ah waxa ka dhici doona webka furan oo aan lahayn cookies. Shirkadaha qaybta tiknoolajiyadda xayeysiiska waxay leeyihiin laba ikhtiyaar: kukiyada ku beddel teknolojiyad kale oo u oggolaanaysa inay cinwaanka ku hayaan webka; ama u beddel ikhtiyaarrada-bartilmaameedka ugu horreeya sida xayeysiiska macnaha guud.
Warshadaha teknolojiyadda xayeysiiska ayaa wali ku jira maalmihii hore ee aqoonsiga xalka ugu habboon ee adduunka cookie-ka-saddexaad kadib. Dhibaatada cookie -ku ma aha teknolojiyadeeda, laakiin waa asturnaanteeda. Iyada oo walaacyada asturnaanta si fiican oo run ahaantii loo xidhxidhay, tiknoolijiyad kasta oo ku guuldaraysata inay ixtiraamto dadka isticmaala ayaa guulaysan doonta. Bartilmaameedka macnaha guud iyadoo la adeegsanayo Habaynta Luuqadda Dabiiciga ah (NLP) iyo Sirdoonka Artificial (AI) Algorithms -ka ma aha oo kaliya mid la heli karo oo lagu shaqeyn karo cabbir ahaan, laakiin sidoo kale waxay caddeyneysaa inay waxtar u leedahay sida bartilmaameedka dhagaystayaasha.
Awoodda summadahu u leeyihiin inay fahmaan nuxurka uu adeegsaduhu isticmaalayo waqtiga gudbinta xayeysiiska ayaa noqon doonta aqoonsi cusub oo waxtar u leh dhagaystayaasha bartilmaameedka ah iyo dookhooda. Bartilmaameedka macnaha guud wuxuu isku daraa ku habboonaanta iyo baaxadda, saxnaanta, iyo kala -go 'la'aanta taas oo ay hormuud ka tahay warbaahinta barnaamijku.
Hubinta Qarsoodiga Macaamiisha
Marka laga hadlayo asturnaanta, xayaysiinta macnaha guud waxay oggolaanaysaa suuqgeynta bartilmaameedka ah ee deegaannada aadka u habboon iyada oo aan u baahnayn xogta macaamiisha. Waxay lafteeda quseysaa macnaha guud iyo macnaha bay'adaha xayeysiinta, ee ma aha qaababka hab -dhaqanka ee adeegsadayaasha internetka. Sidaa darteed, waxay u malaynaysaa in adeegsaduhu ku habboon yahay xayeysiiska iyada oo aan waligiis ku tiirsanayn dhaqankooda taariikhiga ah. Iyada oo la cusbooneysiinayo waqtiga-dhabta ah, bartilmaameedyada macnaha guud ee shirkadda ayaa si otomaatig ah u cusbooneysiin doona si loogu daro bey'ado cusub oo khuseeya xayeysiisyada, wadista natiijooyin la hagaajiyay iyo beddelid.
Faa'iido kale oo istiraatiiji ah ayaa ah inay u saamaxdo xayeysiiyaasha inay farriimaha gaarsiiyaan macaamiisha marka ay aad ugu dhego nuglaadaan farriimaha astaanta ah. Tusaale ahaan, marka isticmaaleha uu daalacanayo waxyaabaha ku saabsan mowduuc gaar ah, waxaa laga yaabaa inay muujineyso xiisahooda inay wax iibsadaan. Guud ahaan, kartida shirkadaha tiknoolajiyadda xayeysiinta si ay u beegsadaan duruufaha la beddeli karo ayaa muhiim ah, gaar ahaan marka ay ka shaqeynayaan suuqyada aadka u gaarka ah.
Iyada oo warshadaha teknolojiyadda xayeysiiska ay ku sii jeedaan adduun aan cookie lahayn, hadda waa waqtigii la qabsan lahaa oo la hubin lahaa in macaamiishu ay awoodaan inay bixiyaan adeegsadayaasha qarsoodiga ah ee adeegsada, kuwa digitally-ka ah ee adeegsada dhammaadka oo si fiican u koontaroola xogtooda. Maaddaama bartilmaameedka macnaha guud uu caddeeyay inuu wax ku ool yahay casriyeynta waqtiga-dhabta ah iyo shaqsiyeynta, suuq-geeyayaal badan ayaa u raadinaya beddelka kukiyada dhinac saddexaad.
Warshado badan ayaa si guul leh ula qabsaday waqtiyo qeexitaan oo muhiim ah waxayna ku dambeeyeen inay noqdaan kuwo waaweyn oo faa'ido badan leh. Abuuritaanka internet -ka, tusaale ahaan, wuxuu u abuuray fursado caalami ah wakaaladaha socdaalka, kuwa aqbalay isbeddelkana waxay ka soo bexeen shirkado maxalli ah ama kuwa qaran oo noqday ganacsiyo caalami ah. Kuwii is -beddelka ka soo horjeeday, oo aan macmiilkooda ka hormarin, malaha maanta ma jiraan. Warshadaha xayeysiintu maahan wax ka reeban ganacsiyaduna waa inay qeexaan istiraatiijiyadooda gadaal. Macaamiishu waxay rabaan asturnaanta si la mid ah waxay rabaan inay ku ballansadaan fasaxyadooda onlayn - haddii tan la oggolaado markaas fursado cusub oo xiiso leh ayaa u soo bixi doona qof walba.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Seedtag Teknolojiyadda Macnaha guud ee AI
Tags: adtechtignoolajiyadaaisirdoonka macmalasturnaanta macaamiishaxayeysiiska guudcookiebuskud la'aancookiesbuskudka xisbiga ugu horeeyaxisbiga koowaadKukiyada-koowaadmustaqbalka xayeysiisyadafarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlpgaarka ah
abuurka tag waa hormuudka Shirkadda Xayeysiiska Macnaha guud oo abuuraya xalal aad u saamayn badan leh oo ku mashquulsan maadada muuqaalka ah ee khuseysa, awood -siinta bartilmaameedka iyo soo -celinta daabacayaasha sare iyo sumcadaha ugu fiican. Shirkadda macnaha guud ee AI waxay u oggolaaneysaa sumcadaha inay la macaamilaan macaamiisha dhexdooda koonkooda danaha iyagoo ku saleysan cookie-la'aan.